Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Randriamalaza Jean Christian
Ramaroson Jean-Michel – FMBB Malagasy Nahazo ny « Executive Master in Sports Governance »
Niarahaba manokana an’Atoa Ramaroson Jean Michel filohan’ny Federasiona Malagasin’ny Basikety Baolina ny IBF na Fondation Internationale de Basketball noho ny nahazoany avy amin’ny Filohan’ny « Commission des Fédérations Nationales de FIBA Afrique »
CNaPS Sport Madagasikara Handray ny A.E RAMASSA avy any Barcelone
Handray ny ekipan’ny A.E RAMASSA avy any Barcelone.Espagne amin’ny lalaom-piralahiana hifanaovana eo amin’ny taranja baolina kitra eny amin’ny « complexe sportif » eny Vontovorona ny alahady faha-22 aprily ho avy izao ny ekipa tompondakan’i Madagasikara, ny CNaPS Sport Itasy.
Baolina kitra - FMF Filohana ligy 12 mangataka fivoriam-be tsy ara-potoana
Nandefa taratasy any amin’ny filohan’ny CAF Ahmad mba hahafahan’ity farany mampiantso fivoriambe tsy ara-potoan’ny federasiona Malagasin’ny baolina kitra ny filohana ligy miisa 12.Anton’izany fivoriana izany,
“Nampiredareda ny fitiavan-tanindrazana tato anatiko ny spaoro”
Randriamalaza Jean Christian ilay Malagasy nibata im-balo ny anaram-boninahitra tompondaka eran-tany eo amin’ny taranja Boxe Chinoise no vahiny voalohan’ny Kintan’ny Fanatanjahantena vokarin’ny Tia Tanindrazana. Izy araka izany no naneho ny firariantsoa sy fahombiazana ho an’ny mpitia fanatanjahantena Malagasy na aiza na aiza misy azy nahatratra ny taona vaovao 2018. Ety am-piandohana dia tsy hay ny tsy haneho etoana ny fisaorana an’ity Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy sy Maneran-tany ity nanaiky nandray tsy am-pihambahambana ny Groupe Vidy Varotra misy ny Tia Tanindrazana sy ny Top Radio Fm 102.8 niresaka taminy tamin’izao fandalovana fohy eto an-tanindrazana izao.
40 taona ny lehilahy ankehitriny, manambady sy zanaka mianadahy izay efa mianoka amin’ny “arts martiaux” ihany koa ary mipetraka any Paris Frantsa ry zareo efa hatramin’ny 20 taona lasa nefa mbola mahay miteny Malgasy tsy misy very.
Vao kely i Jean Christian Randriamalaza dia efa notazaina tao anatin’ny “arts martiaux”. 5 taona izy no nanomboka nanao judo teto Antananarivo teny amin’ny base aéronavale fiasan-drainy. Feno 15 taona dia lasa mpikatroka karate. 18 taona izy no nanomboka nanao Taekwondo teto Madagasikara ary avy eo nanao Aikido. Niampita tamin’ny Boxe Française Savate niaraka tamin’i Parfait Rakotoniriana avy eo. Nahazo « rengagement » tamin’ny Tafika Frantsay tany Paris tao amin’ny “Unité Spéciale Parachutiste” izy ka nanomboka nanao ny Kick Boxing Americain. Taorian’izay anefa dia nahita ny Boxe Chinoise ary hitany fa tena mety be aminy ka nanomboka nilofosany ary tamin’ny taona 2000 izy dia efa voahosotra ho Tompondakan’i Afrika tamin’io taranja io nitohy ny 2001 sy 2002 ka nahatety an’i Tunisie, Maroc sy Sénégal ary Centre Afrique tamin’izany. Efa Tompondakan’i Frantsa tamin’io taranja io ny lehilahy ary avy eo nanomboka nibata imbalo nisesy ny Tompondaka eran-tany tamin’ny Boxe Chinoise IBCF. Izy no misahana ny andraikitry ny fiarovana ny Ambasady Malagasy ao Paris ankehitriny sy misahana ny fiarovana an’ireo tompon’andraiki-panjakana Malagasy mivahiny any Frantsa.
Tany Portugal sy tany Rosia no niatrehany ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany tamin’ny taona 2008 sy 2009 ka tamin’ity taona farany ity dia tapaka ny tongony ka voatery niato 2 taona tsy nanao “combat” ny lehilahy ka ny taona 2011 vao niverina niady ny ho tompondakan’i Afrika tany Sénégal ary nahazo ny anaram-boninahitra Tompondaka eran-tany natao tany Italia ihany koa tamin’io taona io. Somary naka aina kely tamin’ny taona 2012 ary nahazo ny anaram-boninahitra Tompondakan’i Eoropa tany Angletera tamin’ny 2013 ary Tompondaka eran-tany tany Rosia koa tamin’io taona io sy tamin’ny 2014 ary 2015. Tany Carciera any Italia kosa no nibatany ny amboara eran-tany 2 farany sy ny fehikibo tamin’ny taona 2016 sy 2017.
Hanomana ireo mpandimby
Nanapa-kevitra ny hijanona hanomana tanora mpandimby amin’izay hatreto i Jean Christian ary efa manomana mpikatroka 5 azo antoka fa hahatojo ny zava-bitany, mpikatroka notsongainy avy ao amin’ny sekoly “Arts martiaux” naoriny any Paris Frantsa dia ny Samourai Rjc ao Paris 12 è, ny Samourai Rjc ao Paris 14 ary ny Samourai Rjc ao Paris 14 è izay mampiofana indrindra indrindra ny Mix Art Martial, ny Sanda ary ny Boxe Chinoise. Efa manomana “combat” hatrehana amin’ny volana feboary izao izy ireo ankehitriny.
Nieritreritra anefa aho ankehitriny ny hanomana indray ny fandrombahana fanintsiviny sy fanimpolony mba hahazoam-bola hanatanterahana ny vina noeritreretiko dia ny hanangana “centre de sport” sy klioba eto Antananarivo sy manerana ny faritany 6 eto amin’ny nosy tahaka an’ireo 3 efa natsangako any Frantsa. Raha ampahafantarina kely amintsika ny atao hoe Boxe Chinoise dia tsy inona akory fa fikambanan’ny “arts martiaux” Aziatika toy ny lutte Chinoise sy ny judo ary ny kempo izay mampiasa ny totohondry, ny daka tongotra ny “projection au sol” ary ny tolona sinoa. Ady iraisam-pirenena nahatratra 64 no efa natrehan’i Jean Christian Randriamalaza hatreto.
Mijanona ho Malagasy
Marihako fa tena manan-danja izany tompondaka eran-tany izany any ivelany any ka anisan’ireo tsenaina am-boninahitra mihitsy ny tenako rehefa tonga mivahiny any amin’izy ireo. Tany Italia, ohatra, dia efa nieritreritra ny hanangana tsangambato ho ahy mihitsy ry zareo any. Azo eritreretina ny hananganana Federasion’ny Boxe Chinoise tsy ho ela eto Madagasikara. Amiko dia tsy nataoko hitadiavam-bola ny Boxe Chinoise fa tena taranja tiako sy mahaliana ahy tanteraka. Marihako fa izaho no kapitenin’ny ekipam-pirenena Frantsay amin’ity taranja ity ka izany no naharisika an-dry zareo hisolotena ny Firenena Frantsay rehefa miakatra an-tsehatra iraisam-pirenena nefa naleoko nisafidy ny hanandratra ny firenena niaviako. Faniriako ny hijery an’ireo atleta sangany eto Madagasikara sy ny Spaoro Malagasy amin’ny ankapobeny mba hahafahako manampy azy ireo. Hitako fa tia spaoro ny Malagasy fa tsy ampy ara-pitaovana sy ny hoenti-manana eo am-pelatanana na izany aza dia mampirisika an’ireo atleta Malagasy te hiandrandra ny avo lenta tahaka ny azonay dia hitozo hanao fanazaran-tena fototra, hankato ny “discipline” ary hanaraka ny lalana mahitsy hatrany
Raha atao bango tokana dia nitaiza ahy sy nanampy ahy teo amin’ny fiainam-pirahamonin sy ny asa ataoko ny fanatanjahantena sy ny nahazoako ny anaram-boninahitra maha tompondaka eran-tany ahy. Nampifandray ahy tamin’ny olona rehetra manerana an’izao tontolo izao koa izy ary nampiredareda ny fitivan-tanindrazana tato anatiko.
Nandrindra sy Nanatontosa : Ntsoavina Evariste